Raharaham-pirenena : mitaky fifidianana mialoha ny fotoana ny antoko MMM | NewsMada
Raharaham-pirenena : mitaky fifidianana mialoha ny fotoana ny antoko MMM
Nivoaka amin’ny fanginany. Nahitsy sy hentitra ary nazava ny nambaran’ny filoha nasionalin’ny Antoko Malagasy miara-miainga, Andrianainarivelo Hajo, ny asabotsy teo teny Ankerana. Nohitsiny fa tsy mandeha amin’ny laoniny intsony ny fiainam-pirenena. Tonga ny fotoana…
« Manolo-kevitra ny filoham-pirenena izahay manoloana izao tranga miseho eto amin’ny firenena izao, ny hirosoana amin’ny fifidianana filoham-pirenena ato anatin’ny fotoana fohy », hoy izy tamin’ny fanokafana ny fivoriambe voalohan’ny Vehivavy Malagasy miara-miainga (VMMM). Nanteriny fa antoko politika ny antoko tarihiny ary natao haka fahefana izany, ho amin’ny fitantanana ny firenena. « Fotokevitra ijoroanay izany… Ka ho tombontsoa ambonin’ny firenena sy raha tena demokraty ny filoham-pirenena, tokony havela malalaka hifidy ny olona afaka hiaraka hiasa aminy ny vahoaka malagasy ho fampandrosoana ny firenena. Laharam-pahamehana ny tombontsoa ambonin’ny firenena sy ny vahoaka… », hoy ihany izy.
Nohitrikitrihin’ny mpanorina ny Antoko MMM fa manjaka ny tsy fahamarinana tamin’ireo fifidianana natao. Teo koa ny fanamparam-pahefana sy ny hosoka ary koa ny faneriterena samihafa.
Manoloana ireo, nohitsiny fa tsy tompon’andraikitra amin’izao tranga miseho sy ny ho vokany eto amin’ny firenena izy ireo raha mbola manohy ny lalany amin’izao ny mpitondra. Midika ho fialana nenina sy antso mba tsy hahatara ny fanapahan-kevitry ny mpitondra izany fanehoan-keviny izany, indrindra fa manan-jo hiala amin’izao fahantrana izao ny vahoaka. « Aoka handray fanapahan-kevitra am-pahendrena ny filoha », hoy izy.
Tsiahivina fa maherin’ny 600 ireo VMMM niatrika ity fihaonambe voalohany ity. Fotoana koa io nandraisana ireo mpikambana vaovao eo ambany fitarihan’ny filohany, Andrianainarivelo Tantely.